Ngiyeka ukusebenzisa iThunderbird ukusebenzisa i-KMail | Kusuka kuLinux
Ngiyeka ukusebenzisa iThunderbird ukusebenzisa i-KMail
Bengilokhu ngingumsebenzisi we ThunderbirdEmpeleni angikaze ngisebenzise I-Microsoft Outlook kude nayo I-Outlook Express. Evolution Ngizamile isikhashana, futhi Clawnmail… Kepha akukho kulezi ezimbili zokugcina engizithande ngokwanele.
Kusetshenzisiwe Thunderbird ngoba ngezengezo ebengizifakile, futhi ikakhulukazi ingqikithi / isikhumba engisibeke kuso, ibikhanga impela.
Kube sekufika iThunderbird v3 ... nengqikimba yami bekumele ngiyeke ukuyisebenzisa ngoba ibingahambelani, kanye nesikhumba ezinye izengezo, kepha akwenzeki lutho ... ngisebenzise esinye isikhumba ngenhlanhla ngasithola. Kepha, iThunderbird v4 imele inkinga efanayo ... ne-v5, v6, njll njll ... futhi siku-v11, nakuwo wonke ama-plugins nezikhumba engizisebenzisile, cishe akukho noyedwa osele.
Konke lokhu kungenze ngazizwa ngingeneme ngakho Thunderbird, kepha angikaze ngimthole ozongena esikhundleni sakhe ... ngiphinde futhi ngamnika ithuba I-KMail.
Iphuzu ukuthi izinsuku ezimbalwa bengizisebenzisa I-KMail, futhi ngiyaneliseka ngo-99% ngayo 😀
Isibonelo, inginikeza izinketho zokuyenza ngokwezifiso njenganoma iyiphi enye iklayenti le-imeyili ... kepha hheyi, labo bethu abasebenzisa KDE njengoba sijwayele leli lungelo? … LOL !!
Futhi, sebenzisa Akonadi futhi kuze kube manje akukho lutho (kepha AKUKHO LUTHO) okungalungile, lokhu kuvumela izinhlelo zokusebenza eziningi ukwaba idatha efanayo ...
Izinzuzo enginazo manje I-KMail?
Ngokungafani naphambilini, manje ngisebenzisa iklayenti leposi okuyi- Qt, ilungele i- KDE.
Nginezinketho eziningi zokwenza ngendlela oyifisayo, ngokwesibonelo manje sengikwazi ukulawula izaziso, izinqamuleli zekhibhodi, njll.
Okuthile okulula njengokuchofoza inkinobho yokuvala (isiphambano ekhoneni) AKUVALI uhlelo, kepha kukubeka kuthileyi lesistimu (ithreyi), ku Thunderbird Ngidinga i-addon ... in I-KMail cha, inketho iyatholakala lapho 🙂
Inketho etholakalayo yomsebenzi weqembu ngu I-IMAP
Bethela ama-imeyili usebenzisa ama-algorithms afana ne- I-OpenGPG.
Ngabe besengishilo ukuthi ngingashintsha ngokuphelele yonke imibala yohlelo lokusebenza? … Yenza isikhumba sami ngokuchofoza nje? ...
Hlela ama-imeyili ami nge amathegi/tags ... sengathi kusuka kusayithi elenziwe nge- WordPress bekuyi ...
Futhi njengoba ingeke iphelele, kukhona ezinye izinto ezingezansi okufanele uzenze Thunderbird:
Ukusetshenziswa Akonadi ... njengakho konke ukuncika, lokhu kungahle kungaphatheki kahle kwabanye, njengoba Akonadi gcina idatha yakho kuma-DB MySQL ngokuzenzakalela, noma kungalungiswa ukuthi kusetshenziswe I-SQL-Lite... Ngizophenya ngalokhu hehe.
En Thunderbird ngokukhetha ama-imeyili ama-5 (ngokwesibonelo) nangokucindezela [Kwaba] (ukuwathumela kudoti) lapho lawo ma-imeyili ama-5 azomakwa khona ngokuthi «Usuvele ufunde«, Futhi kuthunyelwe kubhasikidi kadoti, ngenkathi ku I-KMail zithunyelwa kudoti kuphela, bese zibonakala kimi njengama-imeyili ama-5 kudoti kodwa angafundiwe (lokhu ngiyabona ukuthi abanye bangabonakala sengathi bayizithutha haha)
Futhi umbuzo wegolide…. Yikuphi okusebenzisa izinsizakusebenza eziningi? ...
Yebo, I-KMail kuyangiqeda 30.8MB RAM, futhi I-Thunderbird 31MB ... ngakho, into efanayo 😀
Cacisa okusebenzayo, ngisebenzisa KDE 4.7.4 (I-KMail v1.13.7), ANGISasebenzisi inguqulo yakamuva (I-KDE 4.8.1), futhi Thunderbird 11 … Kungaba okulungile ukuqhathanisa inguqulo yakamuva ye- I-KMail nabokugcina be- Thunderbird, kodwa ngeshwa ku Debian okwamanje I-KDE 4.8 Kungamaphupho akude nje
Angikhumbuli ukuthi iziphi izibuyekezo / izinguquko ezinezinhlobo eziphakeme ze- I-KMail, ngakho-ke ngiyibheke ngabomvu 😀
Yiliphi iklayenti le-imeyili olisebenzisayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ngiyeka ukusebenzisa iThunderbird ukusebenzisa i-KMail
Angikaze ngibe nezinkinga ngeKmail… nami angiyisebenzisi kangako, kuzoba ngoba ngine-akhawunti eyodwa kuphela futhi ngivame ukuyibheka kusuka kusiphequluli.Angikazami iklayenti le-Opera okwamanje futhi ngalithatha njengelizenzakalelayo isiphequluli
Ngisebenzisa leyo eza ihlanganiswe ku-Opera, ngisebenzisa i-kmail ukuyivivinya, kepha imisebenzi engilethelwa yona yi-Opera yanele, futhi angazi noma iletha okungaphezulu noma okuncane kune-kmail, isiyonke, angikaze ngisebenzise zonke izinketho wohlelo. (Ngisathola imisebenzi ku-kwin)
Angikaze ngisebenzise eyakwa-Opera, kepha angiwuthandi umqondo wokuba neklayenti le-imeyili lincike esipheqululini, ngikhetha bahlukane 😀
Yebo, kepha esikhundleni sokuba nezinhlelo ezi-3 noma ngaphezulu zivuleke njalo, isiphequluli, i-imeyili, i-rss reader, amanothi, konke kuku-Opera okungathi, njengoba usuvele wazi, kungancishiswa kuthileyi lesistimu.
Yebo ngicabanga ukuthi kusukela kulowo mbono kunengqondo, kepha ngithanda (okuthile komuntu uqobo) ukuthi izinto zihlukaniswe futhi zihleleke ... ngokwesibonelo, uma kamuva ngifuna ukuyeka ukusebenzisa i-Opera nokusebenzisa iRekonq, bengingakwazi, ngoba kuncike ku-Opera kimi i-imeyili 🙂
Umhlahlandlela weminye imisebenzi ye-kmail ungaba nentshisekelo, ikakhulukazi ngokusetshenziswa kwe-gpg noma ukumiswa kwamanye ama-akhawunti, ekuqaleni ngazabalaza kancane nalokho kwamaphrofayili.
Muva nje bengisebenzisa i-gpg ukubethela amafayela nokuwagcina efwini (njengezipele).
Yup, bekungeke kube kubi 😀
Ngizobona uma ngenza umhlahlandlela ku-KMail hahaha.
Yebo, sengizame kaningi, kepha ekugcineni uKmail wehluleka ngaphezu kwesibhamu esingenacala. Ngenkathi kwesinye isikhathi kusebenze kahle, kwesinye isikhathi kuba kancane. Kwenzeka kimi ukuthi lapho ngichofoza umyalezo ukuze ngiwufunde, kuthatha imizuzwana engaphezu kwengu-10 ukuwuvula. Njengomsebenzisi we-KDE, ngingajabula ukukwenza iklayenti lami eliyinhloko, kepha ngihlala ngigcina ngokubuyela kuThunderbird, ngenxa yepragmatism enkulu.
Futhi, ngakolunye uhlangothi, ayingivumeli ukuphatha ama-akhawunti wami ama-imeyili ama-5 ngasikhathi sinye, ngendlela elula. Ngicabanga ukuthi kusewuhlelo oluhle, kepha aluhlangabezani nengikulindele noma ahlangabezane nezidingo zami.
Hhayi, kuze kube manje azikho izinkinga ... kepha uma okushoyo kuqala ukwenzeka ... uff ... kuzofanele ngibuyele kuThunderbird LOL !!
Beka okuphambene nami, izinkinga zero nenguqulo yakamuva izinzile kakhulu kunangaphambili.
Isiqinisekiso se-Hyoga kusho
Ngiyavuma ngokuphelele. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngazama uKontact kuKubuntu futhi iposi leKmail lalibulala, ingasaphathwa eyokuthi ngaphandle kwesizathu, oxhumana nabo banyamalala kodwa kusukela kunguqulo yokugcina, ukuthuthuka kube kuningi futhi kuzinzile.
Phendula ku-Hyoga Assure
Inkinga nguKubuntu: Ngize e-Arch ngifuna i-distro lapho i-KDE SC isebenze kahle khona futhi umehluko phakathi kweKubuntu ne-Arch + KDE awuhle neze. I-Kubuntu ingumshini wokwenza ama-shit, ogcwele amaphutha nezimbungulu noma ngabe ukuphi lapho ubheka khona, uvuvukele ngokuphelele futhi unenqola, ngempendulo esindayo, engakhululeki nephuzayo i-KDE ... ku-Arch, i-KDE ilula njenge-LXDE ku-Ubuntu futhi futhi ezinzile ngokumangazayo, ikakhulukazi i-Kmail nayo yonke i-Kontact suite (KDE 4.8.4-3).
Sawubona!! Well ngizoba mfushane. Nginenkinga nge-kmail, ngenza zonke izinyathelo ngokufanele ngize ngithole umyalezo olandelayo:
: Ayikwazi ukungena ngemvume kuseva ye-pop.mail.yahoo.com.
IPop.mail.yahoo.com ayitholakalanga. Iphasiwedi kungenzeka ukuthi ayilungile.
Iseva iphendule yathi: "[AUTH] Ukufinyelela kule sevisi akuvunyelwe."
Njengoba ngifunda, i-Yahoo ayikuvumeli ukusetshenziswa kwe-POP. Ngabe ukwazile ukuhlola i-Yahoo! Yakho kusuka kwamanye amaklayenti e-IM usebenzisa i-POP?
Uxolo KZKG ^ Gaara ngokuphendula sekwephuze kangaka. Iphutha libangelwe ukuthi inketho yeposi ye-POP ayizange inikwe amandla ezinkethweni zeposi. Ngijabule kakhulu iyangisebenzela nge-kmail futhi ngiyabonga kakhulu ngokuphendula.
Ungakhathazeki, sonke sinezinto okufanele sizenze 🙂
Awu ... ngiyajabula ukwazi ukuthi inkinga yakho isixazululiwe
Kungidalele inkinga ku-kde 4.8, bekuyinto u-akonadi angaqalanga ngayo, kepha angikhumbuli kahle, ekugcineni ngakhetha ukungasebenzisi iklayenti leposi ku-Linux.
Futhi kukushiye yiphi isigodo? ... kahle i-Akonadi ayinayo intando yayo, uma ingaqali ngokuthile i-haha.
Kwakuyinto efana ne- * database ye-akonadi ibingatholakali futhi ibizogcina ivalekile *, kusasa ngifaka i-chakra bese ngifaka isigodo.
Ngabe une-akonadi icushiwe? Kuleli fayela ~ / .config / akonadi / akonadiserverrc qiniseka ukuthi ulayini uthi
StartServer = kuyiqiniso
Angisebenzisi amaklayenti e-imeyili, ngiyibuka ngqo kusuka kusiphequluli sewebhu, futhi ngine-akhawunti engaphezu kwe-8 O.0.
Ngithanda ukuba nama-imeyili ami nami, ngakho-ke lapho ngifuna ukufunda okuthile angincikile ekubeni ne-intanethi 🙂
I-Pop3 noma i-Imap?
I-POP3 njalo 😀
Zama i-IMAP ungaxhunyiwe ku-inthanethi, uzomangala 😀
Yini ehlukanisa ne-POP3? 🙂
I-Imap engaxhunyiwe ku-inthanethi inazo zonke izici ze-IMAP, kepha ngokuthola ama-imeyili akho endaweni yangakini, njenge-POP
Angikawuqondi umehluko phakathi kwe-IMAP enqanyuliwe ne-POP3 ^ - ^ U.
Bobabili balanda i-imeyili kwikhompyutha, yini enye?
Ngihlala ngempela nenyoni yezulu
Ngisebenzisa iklayenti le-Opera, ngincamela ukuba nakho konke kokukodwa, lokho ngakunye, kunjalo, iklayenti linokulinganiselwa kwalo, kepha lihlangana kahle kakhulu nemvelo yedeskithophu yami, lisebenza ngokuphelele ne-IMAP (GMail, GMX ne-MyOpera) , futhi ibukeka ihlanzekile kune-thunderbird
Kusuka ku-akonadi u sqlie ngithole lokhu ekhasini losizo le-kde
Kungani ungasebenzisi i-sqlite?
Sizamile. Ngempela. Ayikwazi ukuphatha kahle ukufinyelela ngesikhathi esifanayo.
Sicela ubheke ku-  ukuthola eminye imininingwane ngale ndaba.
Isimo: ukusebenza ngemikhawulo, ukubuyela emuva okuzenzakalelayo kwezinhlelo zeselula
Izindlela ezisekelwayo: Kushumekiwe
Dinga inguqulo entsha kune-Qt eyodwa ezenzakalelayo.
Kudinga umshayeli we-QtSql onamathiselwe ukulungisa izinkinga ze-concurrency (U-Akonadi uthumela imfoloko yomshayeli ngezinguquko ezidingekayo)
Ihamba kancane kune-MySQL
Kungakuhle ngoba ilula kakhulu kepha kubonakala ngathi ayisebenzi: /
Leyo datha wayithatha kuliphi isayithi? Futhi yep, kubi kakhulu… kungaba kuhle ukukwazi ukuyisebenzisa kanjalo…
Ngibathathe ku-KDE techbase: http://techbase.kde.org/Projects/PIM/Akonadi#Why_not_use_sqlite.3F
Ah kubiza ukubonga okuyinkulungwane 😀
Siyakuhalalisela, uKmail unamandla amakhulu, kangangokuba kwesinye isikhathi uyadideka ... Mina ikakhulukazi kwaDebian Squeeze angikakwazanga ukuthumela i-imeyili kusuka ku-akhawunti ye-IMAP ngaphandle kokuzenzakalelayo ...
Uxolo, bengisho i-SMTP.
Okuncamelayo - »Ama-Akhawunti -» Thumela 🙂
Ukucaciswa okuvumelekile, ngisebenzisa i-KDE 4.7.4 (KMail v1.13.7)…
… Angikhumbuli ukuthi yikuphi ukuthuthuka / ushintsho olunezinguqulo eziphakeme ze-KMail, ngakho-ke ngibheke phambili kuzo 😀
I-KMail oyisebenzisayo ayihlanganisi i-Akonadi. Bekufanele ulungiselele i-akhawunti yakho kusuka ku-KMail bese ingaveli ku-Akonadi console, akunjalo?
Okunye ukwenziwa ngcono kweKmail 2 (KDEpim 4.6 nangaphezulu) ukuhlanganiswa ne-Akonadi, kanye nokunye okuningi ozozibonela kona (Yebo, eDebian kusenokushoda kwaleyo xD).
Ngiyisebenzise kusukela ezinsukwini ze-KDE 3.X. Angikwazi ukukutshela ukuthi ngiqale nini ukuyisebenzisa, kepha ngiyazi ukuthi ngiqale ukuyisebenzisa ngemuva kokuthi "ngishiye" iThunderbird 1.X 🙂
Yebo, bekufanele ngiyingeze ngesandla haha ​​... yebo yebo, ngiyakhumbula ukuthi ku-KDE 4.8 okunye okwenziwe ngcono ukuthi i-KMail yathuthukiswa kakhulu, ikakhulukazi (njengoba usho) ihlangana (futhi incike) ngaphezulu ku-Akonadi .
Ngibheke phambili ezinyangeni ezi-5 ezizayo ... ukubona ukuthi i-KDE 4.8 ekugcineni ingena yini ku-Debian Testing LOL !!
Futhi kuthiwani nge-Arch?
I-Arch inginikeze izinkinga eziningi kakhulu…. konke kuhlobene ne-kernel, kepha ngaphezulu kokwanele.
Ngincoma ukuthi ubheke iplasmoid yeLion Mail.Yisazisi seposi esihlangana ne-Akonadi ngakho-ke akudingekile ukuthi uhlale uneKmail evulekile 🙂
ooo angimazi, ngizombheka ngeso lokhozi hehehehehe 😀
Ingabe ukhohliwe ukusho ukuthi i-Lion Mail isebenzisa i-IMAP.
Ngabe i-KMail v1.13.7 isebenzisa i-Akonadi? Ngicishe ngiqiniseke ukuthi iKmail2 iyona eyihlanganisayo, kepha angikwazi ukusho ngoba ngisebenzisa inguqulo ephelelwe yisikhathi ye-KDE, 4.6.5.
Ngisanda kubona ukuphawula kuka-Annubis, bengingakufundanga. Ngempela lokho bekungukuthuthuka okukhulu kweKmail2 nokuthi ifike ku-KDE 4.7 uma ngingaphosisi, kepha ama-distros amaningi awazange ayihlanganise ngoba ibingavuthiwe.
Nami angisebenzisi iklayenti leposi, ngibona ngqo kusuka kuwebhu, ngine-xDDD ku-gmail ne-hotmail. Ngisebenzisa i-firefox plugin «isazisi se-webmail» futhi lapho ngiyithola, isithonjana sivele sikhanyise 😛
Futhi uma ngingekho ekhompyutheni yami, ama-imeyili afinyelela kumakhalekhukhwini wami 😛
Ngiqale ukusebenzisa i-KMail 4.8.2 eSlackware ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, kuhle impela futhi ngibe nesipiliyoni esifanayo osichazayo ngeThunderbird, uhlelo olungenalutho olubi ngempela, kuphela ukuthi kancane kancane siya ngokufuna kakhulu futhi sifuna konke kuhlanganiswe ku-KDE yethu eyigugu.
Ngiyabonga ngamathiphu, ngisanda kuthola inketho yesithonjana kuthileyi wesistimu, ngiqale ukuyifuna ngenxa yokuthi ngithole ukuthi ikhona.
Ngiyabonga ngokushiya amazwana 😀
Yebo impela, iThunderbird akuyona (ngicabanga) inketho enhle kakhulu uma usebenzisa i-KDE, ngoba ayihlanganisi kahle nemvelo, kuyilapho i-KMail yakhelwe ukuba iklayenti le- # 1 le-KDE ... ngokuthile akunjalo? 🙂
Bengisebenzisa i-Kmail cishe iminyaka eyi-2 futhi ngine-akhawunti yami ye-imeyili njenge-POP3.
Iqiniso ukuthi kimi ngumphathi we-imeyili ongcono kunabo bonke ongaba khona. I-Thunderbird ilungile, kepha i-Kmail iphelele futhi isebenzisa izinsiza ezimbalwa.
Ngale ndlela, ngabe kukhona owake walibona leli phutha kuma-akhawunti wabo we-POP3 amisiwe? Kwenzeka ukuthi amanye ama-imeyili onakaliswe futhi angakwazi ukufundwa, ngezinhlamvu ezingajwayelekile ezifana:
Angazi noma kungenxa yokuthi i-Kmail yami yonakele noma nginawo ama-imeyili amaningi ebhokisini lami lokungenayo….
Ngisebenzisa i-Kmail: Sengivele ngiyilungisile .. Kepha ngikwenza kanjani ukuthi ihlale ivulekile kuphaneli futhi kungadingeki ngishiye iwindi livulekile ngaso sonke isikhathi?
Izintandokazi ze-Kmail »Ukubukeka» I-System Tray »Yenza kusebenze isithonjana se-System Tray.
Bengilokhu ngisebenzisa iposi le-Opera elihamba kahle kakhulu, inkinga ukuthi uzokwazi kanjani ku-Opera 15 ukuthi bayayixhuma kwisiphequluli, futhi manje basebenza ngokwehlukana -Linux ayinayo inguqulo yayo okwamanje-, ngakho-ke ngifuna ukuthola elinye iklayenti leposi. Yini oyincomayo? Ngabe uKmail usanconywa kangaka? Ngiyabonga.
Imvamisa ngifunda amanothi akho futhi ngiwathola ethakazelisa, manje, izinto empilweni, ngabuyela kulokhu. AbakwaGoogle bangilethele ngoba ngizama ukushiya iThunderbird nezithasiselo zayo eziyizinkulungwane eziyikhulu, okungenani ekhaya, futhi ngizithola nginenkinga.
Uyazi ukuthi ungafunda kanjani amalebula e-Thunderbird nawo avela ku-Kmail? Emsebenzini nasekhaya ngisebenzisa amalebuli afanayo, okusho ukuthi uma ngimaka u- "ukuphendula" kusayithi eyodwa, ngingaya kwenye ngibone ukuthi yimaphi okumele ngiphendule. Nge-Kmail angazi ukuthi ngingaluthola kanjani lolo lwazi, okusobala ukuthi kulo mlayezo uqobo. Yimiphi imibono?
UJose Javier kusho
Lesi kwakuyisikhala ebengisifuna.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngiqale ukusebenzisa i-kmail, konke kulungile,
kahle, cishe yonke into.
Kuvela ukuthi manje ngemuva kokuyisebenzisa, inqubo esebenzisa u-50% weprosesa iyaqala. "Indoda" ibizwa: akonadi_imap_resource.
Ngabe ukhona onemibono yokuthi angakuxazulula kanjani lokhu?
Phendula kuJose Javier
Ngizamile uKmail ku-Chakra linux futhi iqiniso ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuvula i-imeyili ngayinye. Ngaleso sizathu ngiyikhiphile futhi ngaqhubeka nokusebenzisa iThunderbird ngezindleko zokulahlekelwa ukuhlanganiswa okugcwele ne-kde.
U-Amigso ngenhlanhla ngifihla imenyu ku-kmail futhi angisakwazi ukuyibona, ngingayibuyisa kanjani. Ngiyethemba ungangisiza, ngiyabonga
UMiguel Carmona kusho
Kubize ukunakwa kwami:
4. Inketho etholakalayo yomsebenzi weqembu nge-IMAP
Ungangitshela ukuthi yini leyo mayelana nokusebenza kweqembu nge-IMAP?
Phendula uMiguel Carmona
Insimbi yethu yamahhala